ग्वालीचौरमा काग्रेसको चुनावी अभियान ! – ebaglung.com
ग्वालीचौरमा काग्रेसको चुनावी अभियान !
२०७३ चैत्र २१, सोमबार ०५:३९	अन्य समाचार
बागलुङ २०७३ चैत २१ । नेपाली काग्रेसले आइतबार बडिगाड गाउपालिकाको ग्वालीचौरमा चुनावी अभियान तथा पार्टी कार्यालयको स्थापना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काग्रेसका जिल्ला सभापति दिपेन्द्रबहादुर थापाले चुनावको समयमा सबै एक भएर नेपाली काग्रेस पार्टीलाई अगाडि ल्याउन जुटनुपनेर्् बताए । उनले हरेक क्षेत्रका विकासमा नेपाली काग्रेस सक्षम पार्टी भएकोले स्थानिय निकायको चुनावमा जिल्लामा एक बनाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालले स्थानिय निकायको चुनाव नजिकिदै गरेको अवस्थामा नेपाली काग्रेसलाई चुनावबाट अझ अगाडि बढाउन जिल्लाबासी लाग्नुपर्ने बताएकी थिईन् । नेपाली काग्रेस सबैको पार्टी भएकाले पनि आ आफनो क्षेत्रबाट जुटनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा महाधिबेशन प्रतिनिधिद्धय अम्मरबहादुर कार्की, कृष्ण केसी,जिल्ला सदस्यहरु हरि आचार्य, खिमानन्द पौडेल, गण्डकी थापा, सरस्वती आचार्य, पदमबहादुर पुन, दण्डपाणी कडेल, हरि आचार्य, पदम पुन ,खिममानन्द पौडेल,दर्लिङ पुर्व सभापति भरतबहादुर केसी,दर्लिङका एमलाल रसाइलीपनि बोलेका थिए ।
बडिगाड गाउपालिका सभापति अजुर्न खरेलको अध्यक्षता,तेजेन्द्र श्रीसको स्वागत र भिमगिठेकाका सह संयोजक कृष्ण गुरुङको संचालनमा कार्यक्रममा सम्पन्न भएको थियो ।
जिल्लास्तरमा बामपन्थी तालमेलका विषयमा बहस चलिरहेको छ : अध्यक्ष थापा
माओवादी केन्द्रव्दारा गुल्मी चन्द्रकोटमा चुनावी प्रचार सुरु